Bitcoin ရောင်းဝယ်ခြင်း: ခရစ်တိုငွေကြေးတွင် မြှုပ်နှံချင်ကြသည့် လူသစ်များအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်များ
< စာရင်းဆီ ပြန်သွားရန်
Forex လောကသားများ. ထရိတ်ဒင်းအကြောင်း ပါဝင်တဲ့ FBS ဘလော့, ရင်းနှီးမှုနှင့် အောင်မြင်မှု >
Bitcoin ရောင်းဝယ်ခြင်း အဆင့် ၅ဆင့်
နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရစ်တိုငွေကြေးသည် တကယ့်လူထုအကြိုက်အခြေပြုထားသည့် စီးပွားရေးဆန်သည့်ယဉ်ကျေးမှု အယူအဆဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bitcoinအကြောင်း နေ့စဉ်အချက်အလက်များသည် မီဒီယာမှတဆင့် ထွက်သွားသည်။ ဈေးလမ်းကြောင်းသက်ရောက်မှုကို ခံရသည့် စူးစမ်းလိုသည့်သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်၊ ဘယ်ကနေစရမှန်း၊ ဘယ်အမှတ်တွေကို သုံးသပ်ရမှန်းမသိတဲ့သူဖြစ်ပါက၊ ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးအတွေ့အကြုံ စတင်ရန် ဤအဆင့်များလိုက်နာပါ။
Bitcoin အခြေခံများ လေ့လာပါ
အနည်းဆုံး ၃-၅နှစ်ကြာ စဉ်ဆက်မပြတ် လွှမ်းမိုးထားသည့် မီဒီယာအောက်မှာရှိနေပြီး၊ bitcoin သဘောတရားကို ယေဘုယျသိထားရင်တောင်မှ၊ ပညာပေးအဆင့်များကို မချန်ထားခဲ့ပါနဲ့။
ခရစ်တိုငွေကြေးသည် ဘလော့ချိန်းကွန်ယက်အတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် ဖန်တီးထားသည့် ဆန်းကြယ်သော အဆင့်တူအချင်းချင်းဆက်သွယ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းသည် လူအများ ငွေအလွှဲအပြောင်းများလုပ်ဆောင်သည့်နေရာ၊ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်များအကြား ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ မျှဝေခဲ့သည့် လူထုဆိုင်ရာလယ်ဂျာစာအုပ်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးသည် သင့်ပါစင်နယ်ဒေတာကို လုံခြုံစေသည့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြင့် မှတ်ထားသည်။ ဘလော့ချိန်းအတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် ထင်ရှားပြီး၊ လူတိုင်းအတွက် မြင်သာသည်၊ သင့် ID အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ မဖော်ပြထားပါ။ စနစ်သည် သင့်ငွေအလွှဲအပြောင်းများအား မိုင်းနင်းလုပ်ဆောင်ချက်မှတဆင့် အတည်ပြုပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် စိတ်ချရသော ငွေကြေးမှာ bitcoin ဖြစ်သည်။ အခြားခရစ်တိုများသည် coinပေါင်းစုံ အမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။
နည်းပညာထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်နှင့်၊ bitcoin အထူးပြုများအတွက် bitcoin.org (သို့) bitcoin မဂ္ဂဇင်းတွင် သင်ထောက်ကူများဖတ်ရှုပါ။
ဒီခေါင်းစဉ်မှာ သင့်ကိုယ်သင် လုံလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ပြီလို့ထင်ရင်တောင်မှ၊ ခရစ်တိုငွေကြေးများ၏ သတင်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်ထင်မြင်ချက်များ ရှာဖွေခြင်းကို မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ များသောအားဖြင့်၊ အဝယ်နှင့် အရောင်းအခန့်မှန်းချက်များ ပြုလုပ်သည့်အခါ သင်အားထားနိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များသာဖြစ်ပါသည်။
သတင်းများမှ bitcoin၏ အဆုံးစွန်သော ဈေးထိုးကျမှုနှင့် မမျှော်လင့်သော ဈေးထိုးတက်မှုများအကြောင်း တစီစီပြောနေချိန်တွင်၊ ဤငွေကြေးတွင် ယုံကြည်ထားသည့် လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းမှာ အတော်လေးနည်းသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်တိုငွေကြေးများသည် ဘယ်လောက်ဖောင်းပွလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိကြပါသည်။ ၎င်းသည် သူတို့အာား ဈေးကွက်အပြုအမူ အနည်းဆုံးနှစ်ခုကို ဖက်တွယ်ထားသည့် ပစ်မှတ်ထားပရိတ်သတ်များ ပေးပါသည်။
အဖွဲ့တစ်ခုသည် ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကို မချင့်ချိန်ဘဲ၊ ထို့ထက် bitcoinကို ရေရှည်အတွက် မြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားကြသည်။ သူတို့သည် အကျနှင့် အတက်အားလုံးမှာ ရှင်ကျန်ရစ်ရန်အတွက်နှင့် ဈေးနှုန်း အဆုံးစွန်မြင့်တက်ရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းရန်အသင့်ဖြစ်နေကြပါသည်။ ဤအပြုအမူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် bitcoinအား နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ၏ အနာဂတ်ကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ဝင်ငွေသေချာရနိုင်မည့် အပေးအယူလုပ်တာထက် သူတို့ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်မှုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်ပါသည်။
အခြားအဖွဲ့မှ bitcoin အား ရေတိုတွင် အမြတ်ရစေမည့်ရိုးရာပစ္စည်းအဖြစ် ယူဆကြသည်။ ထိုလူများသည် ရိုးရာဈေးကွက်နှင့်မတူပဲ Bitcoin အရောင်းအဝယ်သည် ၂၄/၇ ဖြစ်သောကြောင့် မရပ်တန်းရောင်းဝယ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့် bitcoin ရောင်းဝယ်သူများ (ခိုင်မာသော သုံးသပ်ချက်နောက်ခံ၊ «ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေ»နောက်မှ နည်းပညာ၏ ကောင်းမွန်သောအသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ၊ စွန့်စားလိုစိတ်ထက်သန်သူများ) ဖြစ်သည်။
အကောင်းနှင့် အဆိုးများကို တွေးတောပါ
Bitcoin သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိဘဲ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်ငွေကြေးဖြစ်စေသော၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်-မထားသော တစ်ခုတည်းသောငွေကြေးဖြစ်သည်။ Bitcoin နှုန်းထားသည် ပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များ၊ နိုင်ငံများ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု (သို့) အခြားအသေးစားစီးပွားရေး ပြဿနာများတွင် မမူတည်ပါ။ ၎င်းတွင် သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းမပါဝင်ပါ။ သို့သော်၊ မည်သူမဆို bitcoin ဘလော့ချိန်းရှိ အကောင့်များမှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပေမယ့် မည်သူမှ ငွေကြေးခြယ်လှယ်ခြင်း (သို့) ပါစင်နယ်ဒေတာ ကြည့်ရှုခြင်းများမလုပ်နိုင်ပါ။
လွယ်ကူသော အစနှင့် အသုံးပြုပုံများ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သူမဆို၊ ငွေလဲလှယ်သည့်စနစ်အလေ့အထ မရှိသူတွေတောင်မှ bitcoin ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် အခြားဈေးကွက်များအတွက် ကြုံရသင့်သည့် အတည်ပြုချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမြောက်များစွာကို ကျော်ကြပါသည်။ စတင်ရန်လိုအပ်သည့် အရာများကတော့ bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် လိပ်စာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒါကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်၊ သူတို့သည် မမ်မိုရီစတစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သူတို့ငွေကြေးများကို အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းနိုင်သည်! ထို့အပြင်၊ bitcoinနှင့်သာဆို ရောင်းဝယ်သူများသည် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းများတွင် ချည်နှောင်မခံရပါ။
ID ခိုးယူမှု အကာအကွယ်
ငွေအလွှဲအပြောင်း လုပ်ဆောင်သည့်အခါ၊ ၎င်းအား သင့်ငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုကို လုံခြုံမှုအာမခံသည့် ထူးခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ဖြင့် အတည်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ပါစင်နယ်အချက်အလက်များ မည်သည့်နေရာကိုမှ မယိုစိမ့်နိုင်ပါ - လူအများသည် ID ခိုးခံရခြင်းမှ အလိုအလျောက် ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ နောက်ပြန်သိမ်းထားရန်နှင့် bitcoin အားကုဒ်ဖော်ရန် ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Bitcoin ဆောင်ရွက်မှုများသည် အလုပ်ရက် ၂ရက်အတွင်းဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ မည်သည့် ဘဏ်ပိတ်ရက် (သို့) အားလပ်ရက်နှင့်မှ မသက်ဆိုင်ပါ။ မည်သူမှ သင့်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို နောက်မဆုတ်ပါ။
ကံမကောင်းသည်မှာ တောက်ပနေသော bitcoinတောင်မှ ၎င်း၏အရေးမပါသောဘက် ရှိပါသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုများသည် ဈေးကွက်လှုပ်ရှားထကြွမှုကို ကျော်လွှားပြီး၊ တည်ငြိမ်ရန် bitcoinသည် အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၅နှစ်လိုပါသည်။ ဈေးကွက်သည် စိတ်ခံစားမှုနည်းရန်နှင့် သြဇာလွှမ်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရန် လိုအပ်သည်။
အတော်လေးကို သစ်သောအရောင်းအဝယ် ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် bitcoin တွင် အန္တရာယ်များပါဝင်ပါသည်။ မြင့်မားသည့် မတည်ငြိမ်မှုသည် စိတ်ချရသည့်စီးပွားရေးပစ္စည်းအနေဖြင့် ငွေကြေးမှာမယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Macro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဥက္ကဌ၊ Raoul Palမှ "ငွေရင်းလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို၊ အလွန်မြင့်မားသည့် အမြတ်ပြန်ရတာလည်း ရှိပါလိမ့်မည်"။ ဤကိုးကားချက်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ၏ အစစမယုံသောသူများသည် ရိုးရာအရောင်းအဝယ်ပုံစံများနှင့် နည်းလမ်းများသည် ထိရောက်စွာအလုပ်မလုပ်သည့်အတွက် bitcoin အရောင်းအဝယ်အား ကြိုတင်ခန့်မှန်းမရနိုင်သည့် ထီအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိခြင်းသည် လုံးဝလွတ်လပ်မှုကိုသာပေးပေမယ့်၊ များစွာသော အားနည်းချက်များစွာလည်းရှိပါသည်။ ဥပမာ၊ သူတို့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသည့်အခါ (သို့) စကားဝှက်နှင့် သီးသန့်သော့ချက်များမေ့သွားသည့်အခါ လူတွေမှာ အာမခံမရှိပါဘူး။
Bitcoin ဆော့ဖ်ဝဲသည် အကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးပါ။ တီထွင်သူများသည် ကိရိယာနှင့် အင်္ဂါရပ်အသစ်များ တီထွင်နေတုန်းဖြစ်သည်။
သီအိုရီအခြေခံကို လေ့လာခဲ့ပြီး၊ အကောင်းနှင့် အဆိုးအားလုံးကို ချိန်တွယ်ခဲ့ပြီးပါက၊ စတင်ရန်အချိန်ကျပါပြီ။
သင့်တွင် ခရစ်တိုပိုက်ဆံအိတ်ရှိရန်နှင့် သင့်ကွိုင်များ ဝယ်ရန်၊ ရောင်းရန် ငွေလဲလှယ်သူ (သို့) အကျိုးဆောင်တစ်ဦးရှာရန် လိုပါသည်။ သင့်အား ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်ပေးပြီး၊ ငွေလဲလှယ်နိုင်စေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ပေးမည့် ကောင်းသတင်းနှင့် စိတ်ချရသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရွေးပါ။ နောက်ထပ်အကြံပြုချက်: လူကြိုက်အများဆုံးငွေကြေး၊ ဥပမာ bitcoinလိုမျိုးကို ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
သင့်ပထမကွိုင်ကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ ခရစ်တိုကို USD (သို့) ခရစ်တိုကို ခရစ်တိုအဖြစ် ရောင်းဝယ်ခြင်းစတင်ပါ။ သို့သော် "ခရစ်တိုအတွဲများ" အရောင်းအဝယ်သည် အောင်မြင်နိုင်သလိုရှိသော်လည်း၊ bitcoin (သို့) altcoin တွင်ရိုးရှင်းစွာ မြှုပ်င်္နှံခြင်းထက် ပိုရှုပ်ထွေးပြီး၊ အန္တရာယ်ပိုများပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး၊ သင့်ဖုန်းကနေ ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။ ခရစ်တိုငွေကြေးများထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ အလှုပ်ကြမ်းသည့်ဈေးကွက်နှင့်အတူ၊ သင်သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ချရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် အချက်ပေးမှုများသတ်မှတ်ထားခြင်းသည်လည်း အသုံးဝင်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခရစ်တိုငွေကြေးများသည် ထက်သန်စွာမြှင့်တင်ထထားသည့် ပေါ်ထွက်လာသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်ထားပါ။ ၎င်းမှာရှိသည့် အရှိန်အဟုန်သည် ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကျော်အတွင်း အလားအလာကောင်းခဲ့တာတောင်မှ၊ မည်သူမှ ရေရှည်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သင့်အကဲဖြတ်မှုနှင့် သုံးသပ်မှုစွမ်းရည်တွင် ယုံကြည်ချက်မရှိပါက၊ ယင်းတို့သည် ကောင်းစွာ-တည်ဆောက်ထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာသည့်အတွက် သင့်ဘဝအတွက် စုဆောင်းငွေများအား ခရစ်တိုငွေကြေးများတွင် မမြှုပ်နှံပါနဲ့။
ဆိုသလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသကဲ့သို့ bitcoinသည် ထူထောင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သာ ရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တိုငွေကြေးများ ရောင်းဝယ်လိုပါက၊ ဥာဏ်ရှိစွာလုပ်ပါ၊ သင့်ကိုယ်သင် ပညာပေးပါ၊ ပိုအတွေ့အကြုံများသော ရောင်းဝယ်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ပါ၊ အန္တရာယ်များကို ထည့်စဉ်းစားပြီး၊ သတင်းများကို လိုက်နာပါ။
အရာအားလုံး ပြောင်းလဲစေမည့် ၂၀၁၉အတွက် 'ငန်းနက်' ခန့်မှန်းချက်များ
သင်သည် Forex ဂုရုတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့ကို လူမှုမီဒီယာမှာ ရှာဖွေပါ
သင့် အမိုက်စား ဇာတ်ကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့နှင့်ဝေမျှပါ